izithakazelo womuntu esizukulwaneni ngasinye sisondela ngokungenakuvinjelwa ezishintsha njalo, futhi lokhu kunzima uxabana. Namuhla abantu abaningi bafuna ukuba okunempilo nokuvivinya umzimba. Ngenkuthalo ukugqugquzela ngendlela enempilo akuyona kuphela isimo, kodwa futhi nezakhamuzi zayo, futhi lokhu ukunyakaza impela eningi abasekeli. Futhi akumangalisi, ngoba umdlalo is hhayi kuphela ukwenza sibalo ukwenzela ukungena okuncane kakhulu, kodwa futhi ngcono impilo, ukuthuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela, okungakwazi kodwa jabulani.
Namuhla, kunamabandla amaningi ezemidlalo ukuze ivumelane konke akuthandayo. Uma ayethanda umsebenzi nge izinto ezisindayo, kufanele ukhethe sawo esiningi. Noma mhlawumbe usuke ajabulela ngomculo Rhythmic? Khona-ke umgwaqo ngqo umdanso. Noma ingabe uthando ukusebenzisa? Kulokhu, cardio - lesikahle ngawe.
impilo sebheyili umzimba - Cardio
uhlobo Izintandokazi imisebenzi yezemidlalo iyasebenza, eqinisweni it has nemiphumela ezuzisayo phezu izinhlelo zokuphefumula futhi senhliziyo yomzimba, ifomu ngokomzimba, kodwa futhi kuba nomphumela omuhle ku isimo sengqondo sezisebenzi. ukuzivocavoca ngcono isimo kanye Soothe.
Yini indawo ukusebenzisa ukukhetha?
Ungase uphawule abagijimi yonke indawo: epaki, enkundleni, ebhishi, kodwa ngokuvamile abantu uyisebenzise ehholo. Treadmill Torneo Linia muhle kakhulu ukuthi le mfanelo. Kunzima phikisana yokuthi Cardio umthelela ngaphandle omuhle empilweni, kodwa akunjalo ngaso sonke isikhathi kungenzeka, ikakhulukazi izakhamuzi megacities.
Kungani kufanele ukhethe cardio phezu treadmill?
Ungathola eziningi mpikiswano mayelana nokuthi ingabe ukuthi udinga ukusebenzisa. Ake sizame sokulungisa le nkinga.
Running on asphalt ezindaweni eziyingozi, ngoba nomthelela ongemuhle uhlelo zemisipha. Ukuze egijima kwi enamathela kanzima kuyadingeka izicathulo, olubamba umfutho, kungenjalo ungase uthole yezinkinga kaningi cardio. Akuwona wonke amadolobha kungenzeka ukusebenzisa phezu izindlela aluhlaza noma sezwe eziwubhuqu. Lena ukukhetha eyamukelekayo, kodwa kungakhathaliseki ukuthi izulu lihle.
Enye ukusebenzisa le nkundla, ezifana amatheku kukhona enamathela rubberized hhayi zibulale amalunga omzimba. Kepha kungenziwa akhiwe kude nasekhaya, futhi sezulu esibi ngeke ukwazi ukusebenzisa. Ngakho-ke, ukukhetha efaneleke kakhulu treadmill egijima Torneo Linia, ngoba ungakwazi ukulisebenzisa noma nini nangaphansi kwanoma iziphi izimo zezulu.
Uma uyayazisa isikhathi noma ufuna ukusebenzisa lapho umphefumulo tando siyindlela esikhulu - Treadmill Torneo Linia kwesokudla ekhaya lakho! A inzuzo ezihlukene: asikho isidingo ukuya ejimini, ukukhokhela ukuvakasha, futhi kwezinye izimo -ozhidat umugqa ukusebenzisa. Ukuze ufake Simulator ayidingi ukuba nalwazi, eyanele ukuba kundawo nendawo ukulandelela.
Izici Track Torneo Linia
Treadmill Torneo Linia kuyinto compact - 160x72x136 cm nesisindo 47 kg. umklamo foldable ivumela Simulator ukuthutha ngaphandle nobunzima, uyibeka kahle lapho ufuna. amandla Engine 1 HP Lokhu kusinikeza ithuba ukufinyelela ijubane 13 km / h umuntu nesisindo 100 kg.
Treadmill Torneo Linia T 203 ifakwe esakhelwe inzwa ishayela nesilinganiso, okwenza kube nokwenzeka ukuqeqesha kuleli uhla edingekayo. Esikrinini Simulator, ungakwazi ukuqapha yakho isivinini running, amandla ukusetshenziswa kanye nebanga. Ungase futhi ushintshe umthwalo.
Lapho kardionagruzki efiselekayo ukusebenzisa amanzi ukugwema amanzi emzimbeni, ngakho-treadmill has ukuma shaker noma ingilazi.
Kunenye imodeli we Simulator, kodwa elinesimo umgijimi isisindo omkhulu kuvunyelwe 15 kg, ngesivinini esiphezulu 12 km / h futhi kancane Ubukhulu ezincane 140x70x130 cm. Lokhu treadmill Torneo Linia 201. zayo zisebenzisa ekhaya njengoba elula njengoba ukhetho odlule .
Treadmill Torneo Linia: Izibuyekezo ikhasimende
Izibuyekezo Customer - isakhi esibaluleke kakhulu kwebhizinisi lapho kuvezwa izimpahla. umkhiqizo onesici noma umdayisi abonakele kuthanda kweso izilimi nge abathengi. Phela, uma umkhiqizo sinezici esihle, ngeke batusa ukuba abangane babo futhi, ngakolunye uhlangothi, khuluma nomunye mayelana nemikhiqizo eliphansi.
Njengoba kuboniswa nezibalo, treadmill Torneo Linia T 203 has Izibuyekezo omuhle kuphela. Okuwukuphela kwento ephambanisa abathengi - izindleko kuqhathaniswa eliphezulu.
Abathengi waphawula umphumela ebonakalayo of kwesisindo nomzimba ekubumbeni emva ukusetshenziswa njalo.
Iqiniso ukuthi treadmill Torneo Linia T 203 Izibuyekezo mayelana nezici has omuhle kuphela, kubonisa ukuthi lo mkhiqizo uye ngempela ikhwalithi enhle. Umenzi anakekela yonke imininingwane, futhi umphumela waba ukuthi umthengi waba nethuba ukuthenga nomqeqeshi esiyingqayizivele ekhaya lakho.
Kulabo ukubukela impilo, esimweni sabo somzimba nje uthanda ezemidlalo, treadmill Torneo Linia T 203 - ukhetho best. Ukuba khona Simulator ekhaya inikeza ithuba lokwenza cardio nganoma yisiphi isikhathi esikahle. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuhlanganisa ibhizinisi ubumnandi. Ufaka ithrekhi eduze ithelevishini noma computer ukuqapha, ungaqalisa uphinde ubuke imibukiso zakho ozithandayo kanye movie. Ngakho, singaqokomisa omunye ngokunenzuzo Simulator - ukonga isikhathi.
Ukugijima Sekuyisikhathi eside kubhekwe ukuthi kungenzeka ukuthuthukisa ukuma futhi silondoloze impilo, ngakho ningakwenqabi kubo. Ufuna ukuba neyodwa ewumqemane, kodwa kuthatha ezinye umzamo.
I-Yak-42D - indiza yezindiza ezincane: izici nokubuyekezwa
Ukukhwehlela in izinsana: indlela yokuphatha ingane